Bulshada Saaxiibka La 'Dementia Friendly - Aging & Disability Resource Center (ADRC)
Isbahaysiga Bulshada Saaxiibtinimo ee Brown County Dementia
Dadka waallida qaba rajo bay leeyihiin,
waa la qiimeeyaa, waana iska leeyihiin.
Hadafka Isbahaysiga Bulshada ee Saaxiibtinimo ee Dementia waa in kor loo qaado wacyiga, horumarinta iskaashiga iskaashiga, waxbaridda, iyo ka wada qayb galka sidii loo abuuri lahaa jaaliyad jahawareer leh oo kobcisa tayada nolosha. Marka la beddelo bulshada, waxaan dhiirrigelinaa ka mid noqoshada, yareynta dhaleeceynta, iyo abuuritaanka rajo.
Isbahaysigani wuxuu ka kooban yahay shakhsiyaad xamaasad leh oo ka socda qaybo ganacsi oo kala duwan iyo qaybo ka mid ah bulshada. Waxaa ka mid ah wakiilo ka socda ADRC, Waaxda Boliiska Green Bay, isbitaalada, kafaala-qaadka la kaalmeeyo, hayadaha daryeelka taageerada, Jardiinooyinka Brown County, iyo kuwo kaloo badan!
Naga hel bogga Facebook!
Tusaha Kheyraadka Dementia
Ogaanshaha asaasaqa wuxuu keeni karaa dareen cabsi, welwel, walaac iyo wareer. Tusahan Kheyraadka Dementia waxaa isku soo dubaridey Isbaheysiga Bulshada Wanaagsan ee Dementia ee Degmada Brown si ay adiga iyo dadka aad jeceshahay u caawisaan helidda jawaabaha su'aalahaaga badan. Tilmaan-bixiyahan wuxuu daboolayaa macluumaadka ku saabsan asaasaqa iyo ilaha ku saabsan dardaaranka hore, nidaamyada taageerada, fursadaha nasinta, daawaynta/daaweynta, waxbarashada, badbaadada guriga, ka fogaanshaha dhibaatada, kaalmada maaliyadeed, iyo qorsheynta nolosha dhammaadka ah.
Tababar ganacsiyada iyo ururada sidii loo aqoonsan lahaa, looga jawaabi lahaa, loona abuuri lahaa meel soo dhaweyn u leh dadka waallida qaba.
Marti galinta, munaasabadaha waxbarasho ee xubnaha bulshada iyo aqoonyahanada.
Bixinta jawi raaxo leh, deegaan raaxo leh halkaas oo dadka waallida qaba iyo daryeelayaashooda ay ku degi karaan, ka qeyb qaadan karaan, kuna raaxeyn karaan kuwa kale isla safarkaas.
Waa maxay Saaxiibada Asaasaqa?
Asxaabta 'Dementia Friends' waa fadhi macluumaad ah oo ay hogaaminayaan Hormuudka Asxaabta Dementia. Kalfadhiga waxaa ku jira aqoon ku saabsan aasaaska waallida, nashaadyada dadka ka caawiya inay fahmaan waxa ay noqon karto in lala noolaado jahawareerka, iyo talooyin ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loola xiriiri karo qof waallida qaba.
Maxaa iga dhigaya Saaxiib Dementia?
Qof kastaa wuxuu fadhiga uga tagayaa ficilkiisa la taaban karo ee ka caawin doona inuu noqdo "Saaxiib Dementia". Ficilku wuxuu noqon karaa mid weyn ama yar sidaad dooratay - ficil kasta wuu tirsanayaa!
Marabtaa inaad noqoto Saaxiib Dementia? Wac ADRC (920) 448-4300.